Mpanao Didy Jadona ve ny Filohampirenena ao Kazakhstan? Ianao no Mandidy. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2017 15:49 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, македонски, Ελληνικά, English
Filoha Kazakh Nursultan Nazarbayev. SARY: Sehatra ho an'ny daholobe avy amin'ny tranonkalan'ny fanjakana Rosiana.
Toy ny mpitarika maro izay mety mifandraika bebe kokoa na latsaka kely amin'ny famaritana, tsy mahazo aina i Nursultan Nazarbayev, ilay filoha Kazakh 76 taona noho ireo sosokevitra hoe mpanao didy jadona izy. Tao anatina tafatafa vao haingana sy nampiharihary zavatra betsaka, niarahany tamina mpanao gazety voafantina tao amin'ilay firenena manan-karena solika, dia niverina ho amina foto-kevitra nomena lanja manokana izy: fanazavana ny antony, amin'ny fiheverany azy, tsy mbola mampifanaraka foana ny fiarahamonina Aziatika amin'ireo fitsapana sy fijalijalian'ny demokrasia.
Tamin'ny 16 Martsa, nisarika ny sain'ny rehetra i Nazarbayev tao amin'ny trano fonenany tao Astana renivohitra, tanàna iray misy iray tapitrisa izay navadiny avy taminà faritan iray mahantra, ary izay toa natokana hitondra ny anarany. Araka ny heviny, manome tombontsoa maro ny repoblika prezidensialy matanjaka toy ilay notantaniny nanomboka tamin'ny firodanan'ny Firaisana Sovietika.
”Ny zavatra manan-danja indrindra dia ny fahazoan'ny vahoaka aina ara-bola. Ahoana no ahafahanao manao politika miaraka amina kibo tsy misy na inona na inona? Tsy mbola misy eto Kazakhstan ny kolontsaina politika ho an'ny fampandrosoana ny demokrasia feno,” hoy ny nambarany nandritra ilay tafatafa.
Tsy vao voalohany, niresaka momba ilay namany nodimandry ary fakàny tahàka i Nazarbayev, ilay mpitarika Singaporeana taloha, Lee Kuan Yew, izay niasa toy ny praiminisitry ny firenena nandritra ny telompolo taona. ”Nitsikera azy daholo ny rehetra, niantso azy ho mpanao didy jadona, ary jereo i Singapore amin'izao fotoana izao sy ny fahombiazany ara-toekarena tratrany,” hoy i Nazarbayev.
”Nanome fahefana ahy kokoa amin'ny maha-filoha ny fankatoavana Lalampanorenana vaovao tamin'ny 1995. Dingana iray nilaina izany mba hahazoana antoka ny fandrosoana haingana ara-toekarenan'ny firenena, amin'ny alalan'ny fanaovana fanavaozana haingana tsy ilàna fanontaniana ny vahoaka sy ny Parlemanta, izay nampikororosy ny fandrosoana ara-toekarena.”
”Fa tsy manao ahy ho mpanao didy jadona izany,” hoy i Nazarbayev nanampy. ”Jereo anie i Eoropa e, fiarahamonina nentim-paharazana misokatra sy demokratika, ary ny fomba hiatrehany ny krizin'ny mpitsoa-ponenana. Fa maninona no tsy avelany hiditra ao ireo mpitsoa-ponenana? Satria mahatsapa ireo mpitarika fa tsy maintsy mihevitra ny tombontsoa nasionaly sy ny tombontsoan'ny vahoakanao ianao.”
Tamina fotoana iray nandritra ilay tafatafa, izay nalefa tao amin'ny fahitalavitra nasionaly, nanao fihetsika iray nanondro ivelan'ny varavarankely teo ivohony i Nazarbayev, teo imason'i glitzy Astana, izay an-davitrisa tamin'ireo vola tombony azo tamin'ny solika no narotsaka amin'ireo tranobe nataon'ireo mpanao mari-trano iraisam-pirenena.
”Jereo any ivelan'ny varavarankely ary jereo i Kazakhstan teo am-piandohan'ny taona 1990 raha oharina amin'ny endriny izao fotoana izao,” hoy izy tamin'ireo mpanao gazety.
Fa mbola misy olana ihany amin'ny fomba fanehoan'i Nazarbayev an'i Kazakhstan: endrika ivelany izany.
Ho an'ireo mpanao gazety tafiditra tao sy ireo solontena nandray anjara tamin'ny resaka fandriampahalemana ao Siria izay natao teto tamin'ny volana Janoary, mety hiseho hampitolagaga tokoa i Astana. Fa tsy maneho an'i Kazakhstan izany, izay mbola ireo làlana mikintoantoana no fenitra, tsy fahampian'ny trano fampianarana ary kolikoly raiki-tampisaka. Fanampin'izany, tsy ny fihaonana an-tampony sy ny fampirantiany ihany no manolotra krizy ara-toekarena be loatra izay mifandraika amin'ny vidin'ny solika ho an'ny olontsotra, miaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ary fiakaran'ny tsy fananana asa mihitsy aza.
Raha toa ka manamaivana ny maha-mpanao didy jadony azy i Nazarbayev, voatery mitsoaka ny firenena ireo mpanohitra mpikatroka mafana fo manoloana ny fanenjehana, fitsaranaary fampidirana am-ponja tsy ara-dalàna. Tamin'ny tranga iray vao haingana, nandositra tany Okraina ilay mpitoraka bilaogy, Zhanara Akhmet, milaza fa notandindonin-doza ilay fahafahany hanohitra an-kalalahana ny fitondrana ara-politika ankehitriny.
Nandritra ny resaka niarahany tamin'ireo mpanao gazety, nanisy tsindrimpeo tamin'ireo fiovàna lalampanorenana vao haingana ihany koa i Nazarbayev izay efa nahita fahefana nifindra avy amin'ny fiadiadian'ny filoha ho an'ny parlemanta sy ny governemanta. Fa ho an'iza ,marina, no tena nanomezana azy ireo?
Niantso ny renivohitra , ny seranam-piaramanidiny ary ireo hafa marika manan-danjan'ny firenena , ny kabary iray teny am-piandohan'ity volana ity (jereo ny lahatsary etsy ambany) nataon'ny solombavambahoaka avy anin'ny antoko lehibe indrindra Nur Otan an'i Nazarbayev, mba hosorana noho ny fihanteran'ny mpitarika, mahatonga ireo mpampiasa tambajotra sosialy mpikomy ao amin'ny firenena hanao fanoharana tsy amin'i Singapaoro, fa amin'i Korea Avaratra.
Mandritra izany, mahamenatra ny fifidianana. Ilay taham-pahavitrihana 95.22% nambara tamin'ny fifidianna iray azon'i Nazarbayev tamin'ny elanelanisa 97.7% tamin'ny fotoana nisiana krizy ara-toekarena tena lalina, dia mbola hita bebe kokoa toy ny porofo hoe efa tsy nifandray intsony, na dia tamin'ny soritra kely amin'ny zava-misy aza ny rafitra politika ao Kazakhstan.
Indrisy anefa, efa rava avokoa ireo loharanom-panoherana mafy indrindra manohitra ny fanjakanjakan'ny olona iray ao Kazakhstan. Nofoanana ireo media mpanohitra tany Kazakhstan, tamin'ny alàlan'ny fitsarana namboamboarina sy sazy mavesatra, ary nakatona ny sasany tamin'ireo media lehibe indrindra tao amin'ny firenena izay manohitra ny fanjakana, anisan'izany ny gazety Respublika. Voasakana tsy tapaka ireo media an-tambajotra.
Amin'ny ankapobeny, ny fanaovana hetsi-panoherena, na dia ny isam-batan'olona aza, dia dia tsy ara-dalàna ao Kazakhstan, nanomboka tamin'ny nitakian'ny lalàna Kazakh ny fangatahana alàlana 10 andro mialoha avy amin'ireo manampahefana eo an-toerana, fangatahana izay nolavina ny ankamaroany dia lavina foana. Tamin'ny volana May 2016, nolavina avokoa ny fametrahana taratasy fangatahana hanao fihetsiketsehana manerana ny firenena mba hanehoana ny fahasorenana momba ny ireo fanovàna miteraka resabe amin'ireo fehezandalàna momba ny tany izay naroson'ny fanjakana, ary mpanao fihetsiketsehana an-jatony no nosamborina nanerana ny firenena. Ireo mafàna fo, Max Bokayev sy Talgat Ayan, izay nilalao anjara asa tamin'ny fikarakarana ireo hetsi-panoherana, dia mbola manefa dimy taona am-ponja amin'izao fotoana izao noho ny ”fandrisihana korontana sosialy”.
Etsy andanin'izany, ny filoha Nursultan Nazarbayev, dia voaaro tsara amin'ireo fanenjehana mandritra ny androm-piainany, ary ny toerany maha-Mpitarika ny Firenena, anarana noforonina tamin'ny 2010, dia mamela azy koa hametraka ny heviny amin'ny politikan'ny fanjakana aorian'ny fisotroan-dronono. Eo anivon'ireo mpitarika voafidim-bahoaka, toa tsy ara-dalàna ny fahitàna ny fametrahana fanamarihana toy izany.